Glọ ọrụ 40G Series | China 40G usoro ndị na-emepụta, ndị na-eweta ya
40Gb / s QSFP + SR 850nm 100m DDM MTP / MPO transceiver optical
Ezubere usoro modul QSFP + iji mee ihe na 40 Gigabit kwa elekere nke abụọ gbasara eriri multimode, tinyere nkwụsịtụ na 10 Gigabit anọ maka njikọ nke abụọ. Ha kwadoro QSFP + MSA na IEEE 802.3ba, 40GBASE-SR4 na IEEE 802.3ba 10GBASE-SR. A na-enweta ọrụ nyocha dijitalụ site na I2C interface, dịka akọwapụtara site na QSFP + MSA.
40Gb / s QSFP + LR 1310nm 10km DDM Duplex LC transceiver optical
40Gb / s 10km QSFP + Transceiver bụ modul transceiver nke emere maka ngwa nkwukọrịta ngwa anya 10Km. Imewe a kwekọrọ na 40GBASE-LR4 nke ọkọlọtọ IEEE P802.3ba na nkwekọrịta QSFP Multi-Source (MSA).